भोकले भारत पठायो, रोगले फेरि फर्कायो « Naya Page
काठमाडौं, ६ बैसाख । कामको खोजीमा दुई महिनाअघि भारतको पुना पुगेका अछाम चौरपाटीका मानबहादुर साउद आइतबार कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै घर फर्किएका छन् । होटेलमा वेटर उनले आगामी दसैंमा घर फर्कने सोच बनाएका थिए । तर, महाराष्ट्रमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै लकडाउनका कारण जागिर गुमेपछि उनी दुई महिनामै घर फर्कन बाध्य भए ।
एक साताअघि रोजगारी गुमेको मानबहादुरले बताए । ‘कोरोना बढेको भन्दै उता होटेल, बजार सबै बन्द छन् । लकडाउनमा अर्काको देशमा थुनिनुभन्दा आफ्नै देश फर्कें,’ आइतबार बिहान नाकामा भेटिएका उनले भने, ‘केही महिना काम गर्ने सोच थियो । तर, कोरोनाका कारण होटेल बन्द भएपछि फर्कनुपर्‍यो ।’
उनीसँगै महाराष्ट्रका विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका चौरपाटीका अन्य चार जना पनि घर फर्किएका छन् । दुई महिनामै फर्कनुपर्दा कमाइ नभएकाले छोराछोरी र परिवारका लागि लुगाफाटो समेत किन्न नसकेको दुःखेसो उनीहरूले सुनाए । रोजगारी गुमेपछि बर्दिया राजापुरका विष्णु कामी पनि पुनाबाट घर फर्किएका छन् । गत पुसमा भारत गएका उनी होटेलमा काम गर्थे । कोरोना बढे पनि काम चलेको भए उतै बस्ने सोच बनाएका थिए, तर होटेल बन्द भएपछि सात–आठ दिनदेखि बेरोजगार बनेका उनले लकडाउनमा थप समस्या हुने डरले घर फर्किएको बताए ।
चरम गरिबीका कारण सुदूरपश्चिमबाट रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर जानेको संख्या ठूलो छ । तर, यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग पनि छैन । ‘धन सम्पत्ति जोड्न अर्काको देश गएका होइनौँ । यहाँ परिवार पाल्नसमेत काम पाइँदैन, त्यसैले बाध्य भएर भारत जानुपरेको हो,’ भारतबाट आइतबार फर्केका कैलाली पहलमानपुरका लोकबहादुर शाहीले भने ।
गत वर्ष लकडाउनको सुरुमा चैत–वैशाखतिर कोरोनाको त्रासले भारतबाट फर्कनेको नाकामा थामिनसक्नु भिड लागेको थियो । तर, घरमा लामो समय बेरोजगार बस्दा छाक टार्न समेत समस्या भएपछि उनीहरू संक्रमण उत्कर्षमै रहेका वेला केही महिनामै भारत फर्किएका थिए । लकडाउनको सुरुमा घर आउनेजत्तिकै भिड यतिखेर नाकामा भारत फर्किनेको देखिएको छ ।
केही सातायता पश्चिमी नाका त्रिनगर र गड्डाचौकीमा स्वदेश फर्किनेको घुइँचो लागेको छ । तर, नाकामा सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन । जसका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको छ । भारतबाट फर्केकामा संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ । यस्तो वेला परीक्षण नगरीकनै घर पठाउँदा संक्रमण झन् चाँडो फैलने जोखिम अत्यधिक बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
त्रिनगर नाकामा मात्रै २ चैतयता भारतबाट फर्केका आठ सय जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो अवधिमा नौ हजार नौ सय ६६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका अहेव गणेश बोहराले बताए । आइतबार मात्र भारतबाट करिब सात सयजना भित्रिएकोमा तीन सय ६१ को मात्रै परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये ४० जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
गड्डाचौकी नाकामा भारतको महाराष्ट्र, नयाँदिल्ली, गुजरातलगायतका क्षेत्रबाट फर्किएका नेपालीको मात्रै ज्वरो नाप्ने र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । सोमबार गड्डाचौकी नाकाबाट नौ सय जना भित्रिएका थिए, उनीहरूमध्ये एक सय नौजनाको मात्रै परीक्षण गरिएको थियो । त्यस्तै, ४ वैशाखमा भित्रिएका एक हजार ११ जनामध्ये एक सय ९४ को मात्रै परीक्षण गरिएको छ । नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा पनि अपनाइएको छैन ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले पछिल्लो केही सातायता सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताए । भारतबाट फर्किएका दुई संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । नाकामा हुने अव्यवस्थित भिडमा स्वास्थ्य सावधानी पनि अपनाएको देखिँदैन ।
हेल्थ डेस्कका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दुई जना ल्याब टेक्निसियन खटाएको छ । उनीहरूले दिउँसोको समयमा एन्टिजेन जाँच गर्दै आएका छन् । महाशाखाले उनीहरूबाहेक दुईजना पारामेडिक, दुई जना नर्स र एक जना सहयोगी पनि खटाएको छ । त्यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक ल्याब टेक्निसियन र तीनजना पारामेडिक खटाएको उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए ।
नारायणी अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. सरोजरोशन दासका अनुसार अस्पतालमा परीक्षण गरिएकामध्ये आधामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसपटक बालबालिका र युवाहरूमा बढी संक्रमण देखिएको छ ।
भारतसँग जोडिएका महोत्तरी नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था नै छैन । जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ । भारतबाट भन्सार हुँदै आउने सवारीसाधनका चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणको कागजपत्र भारतले नै दिने गरेको छ । त्यसकै आधारमा उनीहरूको नेपालमा निर्वाध आवागमन हुने गरेको छ ।
विराटनगरको जोगबनी नाका हुँदै स्वदेश फर्कनेलाई हेल्थ डेस्कमा सामान्य ज्वरो नापेर छाड्ने गरिन्छ । शंका लागेकाहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न १३ महिनाअघि बन्द गरिएको यो नाका अझै खोलिएको छैन । त्यसैले यो नाका भएर फाट्टफुट्ट पाँच–सातजना मात्रै आउने गरेका छन् । महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार एक साताअघिदेखि जोगबनी नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्न थालिएको हो । हालसम्म जम्मा २२ जनाको मात्र परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये एक जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हाल जोगबनी नाकाबाट वैध रूपमा दैनिक पाँचदेखि सातजनासम्म फर्किरहेका छन् । अन्य नाकाबाट फर्केर सम्पर्कमा आएका थप ४६ जनाको विराटनगर महानगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत एन्टिजेन परीक्षण गराएको थियो । हेल्थ डेस्कमा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले तीनजना स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ । मंगलबारदेखि एकजना चिकित्सकसहितको विशेष टोली खटाउने तयारी रहेको महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताए ।
नाकाबाट आउनेलाई राख्न पहिले स्थापना भएका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टर सबै हटाइएका छन् । फर्कनेलाई सोझै ज्वरो जाँच गरेर घर जान दिइन्छ । जोगबनी नाका नेपाल–भारत दुवैतर्फ सिल छ । तर, आसपासका क्षेत्रबाट भने खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै निर्वाध आवतजावत चलिरहेको छ ।
नेपालीहरू दैनिक किनमेल गर्न भारतीय बजार जोगबनी जाने गरेका छन् । उनीहरूको आउजाउमा प्रहरीले पनि खासै कडाइ गरेको छैन । दरैया, मटेर्वा, इस्लामपुरलगायतका चोरबाटोबाट तस्करी पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि मोरङका सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, यो कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
संक्रमण देखिएका तीन जनालाई मेची अस्पताल भद्रपुर पठाइएको र बाँकीलाई आ–आफ्नो घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डिएसपी सुनील दाहालले बताए । झापामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या ५७ पुगेको छ । जसमध्ये आइतबार मात्र १२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण देखिएका भारतबाट फर्किनेलाई होम आइसोलेसन र होटेल क्वारेन्टिनमा राखिने चौलागाईंले बताए । ‘भारतबाट आएकामा संक्रमण देखिए काँकडभिट्टामा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘होम आइसोलेसनमा पनि संक्रमित छन् । साह्रै गाह्रो भएमा मेची अस्पताल भद्रपुर ल्याउँछौँ ।’
‘भारतमा संक्रमण उच्च छ । केही भागमा लकडाउन पनि छ । त्यसकारण नेपाल फर्कनेको संख्या बढेको छ,’ डिएसपी दाहालले भने, ‘विद्यार्थी र मजदुर धेरै छन् । आइतबार तीन दिनसम्म नाका बन्द हुँदा रोकिएकाहरू पनि आउँदा धेरै भिड लाग्यो ।’ भारतबाट आउनेबाट संक्रमण नफैलियोस् भनेर नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा मेचीनगर नगरपालिकाले खटाएका स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो नाप्छन् । शंका लागेका बिरामीलाई त्यहीँ एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नाकामा कडाइ गरेको छ । मास्कविना प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि तयार रहन सबै स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दुईवटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको सिडिओ तिमिल्सिनाले बताए । केही नगरपालिकाले क्वारेन्टिन पनि तयार पारिसकेका छन् । दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा भने यसअघि नै कोभिड अस्पताल स्थापना भइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट